Miasa ora be loatra ao an-trano? Fomba tsotra hijanonana ... | Martech Zone
Miasa ora be loatra ao an-trano? Fomba tsotra hijanonana…
Alatsinainy, Jolay 16, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany hariva dia navelako tany amin'ny toeram-piasako ny famatsiana heriko. Nanana famatsiana herinaratra roa aho (zavatra tsara hafa tokony hatao… mividiana fanampiny foana!) Fa ny iray tamin'izy ireo vao tsy ela akory izay.
Rehefa manoratra ity lahatsoratra ity aho dia manana adiny 2 sy 15 minitra sisa hahavitana asa. Azo antoka fa manana solosaina hafa ao an-trano aho - saingy tsy misy zavatra mandeha tsara toa ny solosainao findainy manokana amin'ny fomba efa nahazatra anao. Anio alina aho dia mihazakazaka mankany:
Avereno jerena ny kaody sasany nalefan'ny orinasa taty amiko mba hitondrako ny tari-dàlana momba ny kaody spaghetti na tsia.
Fitsarana feno ny fifaninanana PHP izay tokony omaly.
Avereno jerena ny firafitra pejy vitsivitsy izay vitan'i Stephen ho an'ny tetik'asa iray andehanantsika.
Manohiza manatsara ny sasany amin'ny ahy WordPress plugins.
Manohiza manao ny sasany Blog-Tipping.
Ary eo ianao no manana azy… izao manana 2 ora sisa aho aorian'ny nanoratako ity lahatsoratra ity! Ka ny tendrony dia: avelao any am-piasana ny famatsian-jiro! Azo antoka fa hametra ny ora anao hahavitana ny asanao ao an-trano.
Fametahana bilaogy: bilaogin'ny marketing atody